Fiarovana ny marikao sy ny lazananao amin'ny marketing amin'ny mailaka miaraka amin'ny mari-pahaizana mari-pahaizana voamarina (VMC) | Martech Zone
Ireo mpivarotra mailaka dia mahatakatra fa ny fampielezan-kevitra mahomby dia mihoatra ny fandefasana sy ny fandefasana hafatra. Ny momba ny fanaovana vinavinan-doha sy ny fananganana fifandraisana izay azon'izy ireo karakaraina rehefa mandeha ny fotoana. Amin'ny ankapobeny, ny fananganana fifandraisana dia manomboka amin'ny laza sy fahatokisana ny marika:
Ny ankamaroan'ny (87%) an'ny mpanjifa manerantany dia milaza fa mihevitra ny lazan'ny orinasa izy ireo rehefa mividy vokatra na serivisy.
Ny fiantraikan'ny laza sy fahatokisana amin'ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana sy ny fahombiazan'ny marketing
Fa ny fitazonana ny fahamendrehan'ny marika eo amin'ny tontolon'ny Internet dia tsy mora, indrindra rehefa miova haingana ny tontolon'ny fandrahonana amin'ny cyber ». Mirongatra ny fanafihana phishing, spam, ary fandrahonana hafa, ary miha mahery setra ny mpisehatra ratsy amin'ny fampiasana ny sehatra itovizany:
22% ny fanitsakitsahana dia nahitana injeniera ara-tsosialy - ny 96% dia tonga tamin'ny alàlan'ny mailaka.
Fandikana data Verizon 2020
Na eo aza ireo fandrahonana miovaova, ny mailaka dia mitana andraikitra lehibe hatrany amin'ny varotra, indrindra aorianan'ny areti-mandringana manerantany:
80% ny mpivarotra no nanamarika ny fitomboan'ny fidiran'ny mailaka tao anatin'ny 12 volana lasa.
Avo dia avo ny tsatoka ary ny fandrahonana amin'ny mailaka dia tsy vitan'ny fampidi-doza amin'ny mpanjifa fotsiny fa manimba tanteraka ny fahatokisana ireo marika orinasa — indrindra raha tena mahomby ny fanafihana mampiasa sehatra hosoka.
Miara-manatsara ny fahatokisana ny mailaka amin'ny VMC, BIMI, ary DMARC
Mba hanampiana ny orinasa hiaro ny marika misy azy ireo amin'ny tontolon'ny fandrahonana mavitrika ankehitriny, dia namorona ny vondrona vondrona mailaka sy mailaka miasa Famantarana marika momba ny famantarana ny hafatra (BIMI). Ity fenitra mailaka miseho ity dia miasa miaraka Fanamarinana Marka voamarina (VMCs) ahafahan'ny orinasa mampiseho ny logo ao anatin'ny mpanjifa mailaka tohana. Sahala amin'ny mari-pamantarana manga ao amin'ny Twitter, ny sary famantarana aseho amin'ny VMC dia manome fahatokisana ny mpandray fa voamarina ny mailaka.
Mba hahafahanao mampiasa VMC, ny fikambanana dia tokony hampihatra koa Fanamarinana, tatitra ary fanajana ny hafatra miorina amin'ny domaine (DMARC). DMARC dia politikam-panamarinana ny mailaka ary ny tatitra momba ny tatitra izay natao hanampiana ny fiarovana ireo fikambanana tsy hampiasa ny fonenany amin'ny fanafihana toy ny fanararaotana, fisoratana anarana ary fampiasana hafa tsy nahazoana alalana. Ny mpanjifa mailaka dia mampiasa azy io hanamarinana fa ny mailaka dia tena avy amin'ny sehatra voalaza. DMARC koa dia manome ny maso hahita fanatsarana ireo hafatra izay alefa avy amin'ny fonenany, izay afaka mampitombo ny fiarovana azy ireo mailaka anatiny.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana VMC azo antoka amin'ny DMARC, ny mpivarotra dia mampiseho amin'ny mpanjifa fa ny fikambanan'izy ireo dia mifantoka amin'ny fandraisana andraikitra hiantohana ny fiainana manokana amin'ny mpanjifa, ary koa ny fiarovana ny mailaka matanjaka. Ity dia mandefa hafatra mahery vaika momba ny fanoloran-tenany ho an'ny marika sy ny lazany.
Mamirapiratra fanazavana momba ny marika ho an'ny fifamofoana
Amin'ny alàlan'ny fampisehoana ny sary famantarana ny fikambanana iray ao anaty boaty mpandray, ny VMCs sy ny BIMI dia tsy vitan'ny hoe manome mari-pamantarana fitokisana fotsiny fa manolotra fomba vaovao iray izay afaka manampy ny orinasa manararaotra amin'ny fomba feno ny fananana voangona ao anaty ny sary famantarana azy ireo, ho an'ny fampiasam-bola kely. Amin'ny alàlan'ny famelana ny mpanjifa hahita sary famantarana mahazatra ao amin'ny boaty fampidirana azy ireo alohan'ny hanokafan'izy ireo ny mailaka akory aza, ny mpivarotra dia mahazo fotoana manapaka ny tabataba ao anaty boaty feno valin-drihana ary mamela fahatsapana marika bebe kokoa. Ny logo dia tandindona mahery vaika izay mifanaraka amin'ny mpanjifa ary manampy amin'ny fiantohana ny fifandraisana tsy miova sy tsara. Valiny voalohany avy amin'ny Fitsarana Yahoo Mail BIMI miaraka amina mpandray anjara an-jatony no nampanantena, ary ny mailaka voamarina dia naseho mba hanatsarana ny fifamatoran'ny 10 isan-jato.
Ny VMC dia mandaitra miavaka ihany koa satria izy ireo dia miorina manodidina ny fantsona mailaka efa nanambola sy novolavolain'ny fikambanana nandritra ny taona maro.
VMC dia mitaky fiaraha-miasa amin'ny IT
Mba hanararaotana ny VMC, ny mpivarotra dia mila miara-miasa amin'ny departemantan'ny IT ho azo antoka fa manaraka ny fenitra fampiharana DMARC ny fikambanan'izy ireo.
Ny dingana voalohany dia ny fametrahana S Framework Framework (SPF), izay natao hisorohana ny adiresy IP tsy nahazoana alàlana handefa mailaka avy amin'ny fonenanao. Ny ekipa IT sy marketing dia mila manangana DomainKeys Identified Mail (DKIM), fenitra fanamarinana mailaka izay mampiasa cryptography fanalahidy ho an'ny daholobe / tsy miankina hanakanana ny fanelingelenana ny hafatra rehefa mandeha izy ireo.
Rehefa vita ireo dingana ireo, napetrak'ireo ekipa ny DMARC mba hanara-maso ny fifamoivoizana amin'ny mailaka, hiteraka tatitra ary hanomezana fahitana amin'ny hafatra nalefa avy amin'ny sehatra.
Ny fananganana ny fampiharana ny DMARC dia mety maharitra andro na herinandro, miankina amin'ny haben'ny orinasa. Na izany aza, manampy indrindra ny fikambanana amin'ny fanamafisana ny fiarovana ny mpampiasa izany, miaro tena amin'ny fanafihana phishing marobe, ary manome ny mari-pahaizana ho an'ny VMC mari-pahaizana. Isan-karazany bilaogy ary misy loharanom-pahalalana hafa an-tserasera manampy ny fikambanana ho vonona DMARC.
Rehefa lasa be mpitia mpivarotra mailaka ny mari-pankasitrahana VMC dia azo inoana fa tsy ho ela ny mpanjifa sy ny vinavina dia hanantena famantarana mahazatra ao anaty boaty mailaka ataon'izy ireo. Ireo orinasa izay mandray fepetra hanombohana ny fandaminana ny VMC sy ny DMARC anio dia hijoro ho miavaka amin'ny vahoaka ary hanome toky ny mpihaino fa nataony ho laharam-pahamehana ny filaminana. Amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ny fahatokisana amin'ny serasera mailaka rehetra azy ireo dia hanohy hanamafy ny marika sy ny lazany izy ireo na dia mandritra ny fotoana miovaova aza.
Ampidino ny Torolàlana VMC Marketing an'ny Digicert
Tags: BIMIdigicertDMARCFanamarinana ny hafatra miorina amin'ny domainefanamarinana mailakasary famantarana ny mailakafitokisana amin'ny mailakasary famantarana inboxphishingrafitra politika mpandefaspfmari-pankasitrahana marketing voamarinavmcmari-pankasitrahana vmc
Mark Packham dia nanatevin-daharana ny DigiCert tamin'ny Jolay 2016 ary manara-maso ny paikadin'ny marika, ny gen lead, ny leadership leadership, ny paikadin'ny votoaty, ny fifandraisana amin'ny daholobe, ny marketing nomerika ary ny fifandraisan'ny mpandalina. Izy dia nitondra traikefa nandritra ny 20 taona tamin'ny naha mpivarotra stratejika sy mpitantana marika manerantany azy, rehefa nitazona ireo fifanakalozana ara-barotra manerantany niaraka tamin'ny orinasa toa ny Salesforce.com, Microsoft, Verizon, ary Abbott.